Sidaas oo kale ayaa astaanta cusub ee 'Evernote' loo raacayaa qaabab cusub iyo in ka badan | Abuurista khadka tooska ah
Evernote waxay leedahay astaan ​​cusub oo loogu dabaaldego sanadguuradeeda sida ugu fiican ee ugu macquulsan. App loogu talagalay qaadashada qoraalada oo noqday mid ka mid ah kuwa ugu fiican shaqooyin fara badan iyo awooddeeda isku xirka qoraalada u dhexeeya tiro wanaagsan oo qalab ah oo leh nidaamyo kala duwan.
Isaga ayaa iska leh toban guuradii, sidaa darteed waxay ahayd toban sano oo dhan oo barnaamijkan si aan wax uga qorno uu naga caawiyey inaan diiwaangelino fikradaha, keydino cuntada sida loo kariyo ama aan u xafidno dhammaan noocyada wararka si aan mar dambe u eegno ama u akhrisano. Astaanta ma uusan soo marin isbedel xad dhaaf ah, laakiin waa horumar yar.
Ayaa ahayd DesignStudio oo ah kii fuliyay isbeddelkan taas oo isbedel khiyaano leh lagu ogaan karo iyada oo aan hoos u dhigin aqoonsiga sumadda. Taasina waa nooca cusub ee astaanta 'Evernote' waa horumar ka muuqda kii hore, kaas oo muujinaya qaybo ka mid ah astaanta.
Midbaa fiican dhaxal u leh dhaxalkeeda laakiin taasi waxay ku sii fiday degaano cusub. Midab saafi ah oo midab leh, qaab aad loo sifeeyey, iyo qaab farsameed oo casri ah ayaa ah saddexda astaamood ee ugu muhiimsan astaanta cusub ee Evernote
Waa in la sheegaa in naqshadeynta calaamaddu weli ma dhammaan, in kastoo talaabooyinka ugu horeeya la qaaday hadana ma jiri doonaan isbadalo badan shaqada dhameystirtay. Waxyaabaha xiisaha leh ayaa ah in la arko sida midabku u muujiyey iyo sida uu isbeddel ugu dhacayo far-qorista; lagama maarmaanka u ah maalmahan markuu awoodo inuu calaamadeeyo meelaha qaarkood ee sumadda.
Muuqaalka aan wadaagnay qiimaha ugu muhiimsan ayaa la soo bandhigaa isbeddelka astaanta cusub. Waxa kale oo muhiim ah in isha lagu hayo koritaanka astaanta lafteeda saadaallo kala duwan, si loo qiyaaso halka ay ku socoto.
Waan arki doonnaa sida ay astaanta cusub ku egtahay in dib loogu soo celiyo safafkan; sida kuwa kale oo badan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » logos » Evernote waxay leedahay astaan ​​cusub sanad guuradeedii XNUMXaad
Isboortiga Nike ee firileyda laga sameeyay